Dowladda Somalia ayaa soo saartay amaro iyo habraacyo lagu xakameynayo cudurka Covid-19… – Hagaag.com
Dowladda Somalia ayaa soo saartay amaro iyo habraacyo lagu xakameynayo cudurka Covid-19…
Posted on 3 Maarso 2021 by Admin in National // 0 Comments
Ra’iisal Wasaaraha Somalia, Maxamed Xuseen Rooble markii uu qiimeeyey soo laba kaclaynta xanuunka COVID-19 Markii uu dib u eegis Ku sameeyey go’aamadii hore ee Xukuumadda, Isla-markaana tixgeliyay talooyinkii iyo soo jeedimihii Guddiga Qaran ee ka Hortagga iyo Xakameynta Cudurka COVID-19:
XAKAMEYNTA XANUUNKA COVID-19 EE GUDAHA DALKA:
• Xafiisyada Dowladda si ku meel gaar ah ayaa loo xirayaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 3da March 2021, Shaqaalaha waxey kasoo shaqeyn doonan guriga, marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada muhiimka ah.
Waxa muddo 30 maalmood ah la joojiyey xafladaha Aroosyada, sidoo kalena waxa la mamnuucay goobaha caweysyada ee habeenkii dhalinyaradu ku kulanto.
In dadka isu soo baxayaa isu jirsadaan 2 mitir
In qof kasta oo imanayna isu soo baxa uu soo qaato afxir ama mask
Waxa waajib ah in dhammaan dadka ka adeeganaya goobaha ganacsiga ay qaataan afsaar ama afxir.
• Qof walba oo imaanaya ama ka dhoofaya Dalka waa inuu si joogta ah u xirtaa Afxirka si loo yaareeyo faafitaanka cudurka Covid19.
• Arimaha la xiriira kala badalka Ciidamada Nabad ilaalinta (AMISOM) iyo Ciidamada Ilaaliya xarumaha UNka (United Nation Guard Unit in Mogadishu) waxaa lafaraya inay raacaan habraaca UNGU Rotation Plan for COVID-19 si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dalka.
Waxa la farayaa Wasaaradda Caafimaadka in sida ugu dhakhso badan ay u soo diyaariso habraac lagu hubinayo bedqabka dadka ka imanaya Dalka dibaddiisa, isla markaana lagaga qaadayo baaris rasmi ah marka qofku soo dego, qofkii COVID19 laga helana lagu karantiilo, iyada oo qofkaasi jeebkiisa ka bixin doono qarashka karantiilka.